Job 33 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Elaịhu baara Job mba maka na ọ na-ekwu na ya bụ onye ezi omume (1-33)
A hụrụ ihe mgbapụta (24)
Ka o nweghachi ike okorobịa (25)
33 “Ma ugbu a, Job, biko nụrụ okwu m. Gee ntị n’ihe niile m na-ekwu. 2 Biko, m ga-emegherịrị ọnụ m. Ire m* ga-ekwurịrị okwu. 3 Ihe m na-ekwu na-egosi na obi m dị ọcha,+Eji m obi ọcha na-ekwu ihe m ma. 4 Ọ bụ mmụọ Chineke kere m,+Ọ bụkwa ume Onye Pụrụ Ime Ihe Niile kupụtara mere ka m dị ndụ.+ 5 Saa m okwu ma ọ bụrụ na i nwere ike. Kwuo ihe ndị ị chọrọ ikwu n’ihu m. Jikere ịzara ọnụ gị. 6 Mụ na gị bụ otu ihe n’anya ezi Chineke. Ọ bụkwa ájá ka e ji kpụọ m.+ 7 N’ihi ya, i kwesịghị ịtụ m ụjọ,Ihe m na-ekwu ekwesịghịkwa ime ka ike gwụ gị. 8 Ma e nwere ihe i kwuru ná ntị m. N’eziokwu, m nọ na-anụ ka ị na-asị, 9 ‘Abụ m onye ezi omume. Anaghị m eme mmehie.+ Aka m dị ọcha. Anaghị m eme ihe ọjọọ.+ 10 Ma Chineke na-achọ ihe ọ ga-akụdo aka mesie m ike. O weere m ka onye iro ya.+ 11 Ọ na-etinye ụkwụ m n’ọtọsị. Ọ na-enyocha ụzọ m niile.’+ 12 Ma i kwuteghị ihe a i kwuru. Ọ bụ ya mere m ga-eji saa gị okwu: Chineke karịrị nnọọ mmadụ efu.+ 13 Gịnị mere i ji ekwu na ihe o mere adịghị mma?+ Ọ̀ bụ maka na ọ saghị gị ihe niile i kwuru?+ 14 N’ihi na Chineke na-ekwu okwu ugboro ugboro.* Ma e nweghị onye na-ege ya ntị. 15 Ná nrọ, n’ọhụụ a na-ahụ n’abalị,+Mgbe oké ụra ji ndị mmadụ,Mgbe ha na-ehi ụra n’àkwà* ha. 16 Ọ bụ mgbe ahụ ka ọ na-emeghe ntị ha,+Mee ka ndụmọdụ ya ruo ha n’obi, 17 Iji mee ka mmadụ hapụ omume ọjọọ,+Meekwa ka ọ kwụsị ịdị mpako.+ 18 Chineke na-azọ ya ndụ* ka ọ ghara ịbanye n’olulu,*+Ka a ghara iji mma agha* laa ndụ ya n’iyi. 19 Mmadụ na-amụtakwa ihe mgbe o dina n’àkwà* ya, ahụ́ ana-egbu ya mgbu,Nakwa mgbe ọkpụkpụ na-afụ ya ụfụ n’akwụsịghị akwụsị, 20 Nke mere na ọ* na-asọ nri oyi. Ọ naghịdị* ekwe eri nri dị mma.+ 21 Ọ taala ahụ́. A na-ahụzi ọkpụkpụ ya niile anya. 22 Ọ* na-abịa olulu* nso. Ọ ga-adaba n’aka ndị na-egbu mmadụ. 23 Ọ bụrụ na e nwere otu onye ozi* n’ime otu puku ndị oziNke ga-ekwuchite ọnụ ya,Bụ́ onye ga-agwa mmadụ ihe dị mma ọ ga-eme, 24 Mgbe ahụ, Chineke ga-emere ya amara, sị,‘Napụta ya ka ọ ghara ịbanye n’olulu.*+ Ahụla m ihe mgbapụta.+ 25 Ka ahụ́ ya dị ọhụrụ* karịa otú ọ dị mgbe ọ bụ nwata.+ Ka o nweghachi ike o nwere mgbe ọ bụ okorobịa.’+ 26 Ọ ga-arịọsi Chineke arịrịọ ike.+ Chineke ga-emere ya amara. Ọ ga-eti mkpu ọṅụ mgbe ọ ga-ahụ ihu Chineke. Chineke ga-emekwa ka mmadụ efu bụrụghachi onye ezi omume n’anya ya. 27 Onye ahụ ga-agwa ndị mmadụ,* sị,‘M mehiela.+ M meela ihe na-adịghị mma. Ma, a taghị m ahụhụ e kwesịrị ịta m.* 28 Ọ napụtala mkpụrụ obi* m ka m ghara ịbanye n’olulu.*+ M ka ga-anọ ndụ na-ahụ ìhè.’ 29 N’eziokwu, Chineke na-emere mmadụ ihe niile aUgboro ugboro,* 30 Ka o si n’olulu* kpọghachi ya,*Ka ìhè nke ndụ wee nwuoro ya.+ 31 Ṅaa ntị, Job. Gee m ntị. Gba nkịtị ka m gwakwuo gị okwu. 32 Ọ bụrụ na e nwere ihe ị ga-asa m, saa m ya. Kwuo okwu, n’ihi na achọrọ m igosi na aka gị dị ọcha. 33 Ọ bụrụ na e nweghị ihe ị ga-ekwu, i kwesịrị ige m ntị. Gba nkịtị. M ga-akụziri gị amamihe.”
^ Na Hibru, “Ire m na okpo ọnụ m.”
^ Na Hibru, “otu ugboro nakwa ugboro abụọ.”
^ Na Hibru, “mkpụrụ obi ya.”
^ Ma ọ bụ “ngwá ọgụ.”
^ Na Hibru, “ndụ ya.”
^ Ma ọ bụ “Mkpụrụ obi ya anaghịdị.”
^ Ma ọ bụ “Mkpụrụ obi ya; Ndụ ya.”
^ Ma ọ bụ “mmụọ ozi.”
^ Ma ọ bụ “Ka ahụ́ gbasie ya ike.”
^ Na Hibru, “ga-abụrụ ndị mmadụ abụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ma ọ baraghị m uru.”
^ Ma ọ bụ “ndụ.”
^ Na Hibru, “Ugboro abụọ, ugboro atọ.”